Best iPhone Photo Manager | Maamul iPhone Photos g
"Cidna ma leeyahay tababaraha sawir kasta oo faa'iido leh iPhone in ay ku taliyaan oo kaliya ma ku xirnaan karaan Lugood si ay u maareeyaan photos on my iPhone 5. Waxaa ka careysan in la isticmaalo Lugood si hagaagsan photos aan waxtar lahayn?.!" - Michael
Si aad u noqoto qof daacad ah, Lugood runtii waa qalab fiican si ay u maareeyaan iPhone videos iyo music. Si kastaba ha ahaatee, marka ay timaaddo maaraynta photos on iPhone, ma aha sidaas u weyn. Dabcan, waxa kuu ogolaanayaa inaad u hagaagsan sawirada kombiyuutar si ay iPhone, laakiin waxaa ka maqan ugu muujinta dejinta dadka isticmaala iPhone u baahan tahay: sawiro ka iPhone gudbaayo computer waayo gurmad ama tafatir dheeraad ah, iskaba daa tirka sawiro ama la abuuro albums sawir. Taasi waxa ay tababare iPhone sawir xirfadle tahay in ay sameeyaan. Haddii aad u baahan tahay tababare iPhone Photo ah u Windows, waxaan kuu soo jeedinaynaa in ay isku dayaan Wondershare TunesGo Retro . Waa arrin wanaagsan ee maareynta photos iPhone.
Isku day inaad ugu fiican iPhone Photo qabaal - Wondershare TunesGo Retro
Wondershare TunesGo Retro waxaa gaar ahaan loogu talagalay dadka isticmaala iPhone si ay u maareeyaan files on iPhone. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad dhoofin iPhone photos, soo dejinta iyo tirtirto photos, la abuuro iyo saaro albums sawir muuqaal. Info soo socda waxay ku saabsan tahay sida loo isticmaalo TunesGo Retro si ay u maareeyaan photos iPhone. Sida aad ka arki, TunesGo Retro (Mac) waxaa laga heli karaa sidoo kale. Haddii aad qabto Mac ah, aad isku dayi kartaa in ay maareeyaan photos iPhone on Mac.
Tallaabada 1. Isku aad iPhone la PC
Download, rakibi, iyo abuurtaan TunesGo Retro aad Windows PC. Waxaa si fiican u la shaqeysaa PC Windows (Windows 8 PC ku salaysan ka mid ah). Isticmaal cable USB iPhone in ay ku xidhmaan aad iPhone la PC. TunesGo Retro aqoonsan doonaa iPhone oo tus in uu furmo suuqa hoose.
Fiiro gaar ah: Si aad u isticmaasho TunesGo Retro si ay u maareeyaan photos iPhone, waa in aad la rakibi Lugood on your computer hore.
Tallaabada 2. Maamul photos iPhone
Riix Photos dhinaca bidix ee suuqa hoose u muujiyo Roll Camera, Photo Library iyo albums sawir. Hadda aad awood u leedahay maareynta photos iPhone si fudud.
Photos dhoofinta iyo album sawir in computer;
Bedelka sawiro ka computer si iPhone ;
Delete photos iPhone Photo Library ;
Delete photos ee iPhone Camera Roll ;
Samee album sawir ku iPhone;
Delete albums Photo ka iPhone ;
Isku day Manager iPhone Photo - Wondershare TunesGo Retro hadda!
Fiiro gaar ah: The version Mac - TunesGo Retro (Mac) ma tirtiri kartaa sawiro ku giringiriya Camera ka iPhone oo ay maamushaa in macruufka 6 hadda.
> Resource > iPhone > Manager Best iPhone Photo loo maareeyo iPhone Photos